Karim Khan oo loo doortay Dacwad oogaha Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada -
Home News Karim Khan oo loo doortay Dacwad oogaha Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada
Karim Khan oo loo doortay Dacwad oogaha Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada
Khan ayaa ka guuleystay codbixin qarsoodi ah seddex musharax oo kale si loogu badalo dacwad oogaha hogaamiyaha Fatou Bensouda.
Intii uu ku jiray xirfadiisa sharciga ee 27 sano Khan, oo sidoo kale ah Queens Counsel, wuxuu u shaqeeyay ku dhowaad maxkamad caalami ah oo kasta oo dambiilayaal ah doorka dacwad qaadista, difaaca iyo lataliyaha dhibbanayaasha. Marka laga hadlayo ICC Khan wuxuu caan ku yahay inuu noqdo hogaamiye qareen difaaca oo ka soo shaqeeyay kiisaska Kenya, Sudan iyo Libya.
Waxaa jiray loolan siyaasadeed oo xoog leh oo loogu jiray shaqada ugu sareysa ICC xili si aad ah loo baaray xafiiska xeer ilaaliyaha.
Maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa cunaqabateyn saaray sanadkii hore shaqaalihii maxkamada oo ay ku jirto Bensouda taas oo salka ku heysay baaritaano xafiiskeeda uu ku sameeyay dambiyo dagaal oo laga yaabo inay ka dhacaan Afghanistan, oo ay ku jiraan ciidamada Mareykanka. Mareykanku xubin kama aha maxkamadda.
Previous articleMadaxweynaha Kenya oo ugu baaqay ku xigeenkiisa inuu taageero dowlada ama uu is casilo
Next articleKulan looga hadlayo arrimaha doorashooyinka oo maanta ka furmaya Baydhabo